हद पार गरेर प्रेम गर्छन् यी पाँच राशी भएकाहरु ! « News24 : Premium News Channel
हद पार गरेर प्रेम गर्छन् यी पाँच राशी भएकाहरु !
उनीहरुको ध्यान कहिले पनि आफ्नो प्रेमीभन्दा बाहिर हुँदैन त्यसकारण उनीहरुलाई निकै क्लिंगी मानिन्छ । प्रेमीले के खाइरहेको छ, कोसँग छ, के खाइरहेको छ, कहिले सुत्छ, कहिले उठ्छ।।। यी सबै कुराको जानकारी हुनुपर्छ । यो स्वभावका कारण उनीहरुको सम्बन्ध धेरै लामो समय टिक्न पाउँदैन ।
२५ जना डाक्टरको समूहले महिलाको पेटबाट निकालियो ६० किलोको ट्युमर
दूध राख्ने भाँडाेमा बम भेटियाे !
स्वेच्छिक मृत्युका लागि देश छाड्ने यी वैज्ञानिक, भन्छन्– ‘मलार्इ धेरै बाँचेकाेमा पछुताे छ’